နည်းလမ်း ၇ သွယ် အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
နည်းလမ်း ၇ သွယ် အပိုင်း (၁)
Posted by ko Myintko on June 29, 2012 at 22:24 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
[ A.J Hoge ရဲ့ ဆောင်းပါးတခုကို ဘာသာပြန်တင်ဆက်ကြည့်တာဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးသော ဘာသာပြန်လက်ရာပါ။ လုံးစေ့ ပါဋ္ဌ်စေ့ဘာသာပြန်မိတာဖြစ်လေတော့ ဖတ်ရတာ နဲနဲ ထောင့်ပြီး ဖတ်သူ ရှိမှ ရှိပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်မိပေမယ့် ဖတ်ရှုအားပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများရှိနေတာ သိရတော့ တကယ်ပဲ အားတက်မိပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်စကားကို ငှားသုံးရရင်တော့ ဒီညီအစ်ကို မောင်နှမများရဲ့ အားကိုးနဲ့ ကျွန်တော် ဆက်ပြီး မိုက်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးမှာ A.J Hoge က သူ့ရဲ့ အကြံပေးချက် (နှင့်အတူ လေ့လာနည်း ၇ နည်း) ကို လိုက်နာမယ် ဆိုရင် ၆ လအတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်ပါစေ့မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ။ ဒီတခါ လေ့လာနည်း ၇ နည်းဆိုတာ ဘာများပါလိမ့်။ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။]
၁။ မီးနင်းကျက်ခြင်း အလျဉ်းမပြုရ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Effortless English Club ရဲ့ ဒါရိုက်တာ A.J.Hoge ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကလာပ်က နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ နည်းလမ်း နံပတ် ၁ က စကားစု ဖွဲ့လို့ လေ့လာပါ။ မီးနင်းကို လုံးကောက် မကျက်ပါနှင့် ဒီ နည်းလမ်းဟာ အခြားသော နည်းလမ်း ၆သွယ်လိုပါပဲ။ အင်မတန်မှ ရိုးစင်းပြီး လွယ်ကူလွန်းလှပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြားသော နည်းလမ်း ၆သွယ်နည်းတူ တကယ့်ကို powerful ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်တကယ်ကို ရိုးစင်းပြီး powerful ဖြစ်လွန်းတာ သေချာပါတယ်။
နည်းလမ်း ၁ က ဘာပါလိမ့်။ မီးနင်းကို လုံးကောက် မကျက်ပါနဲ့။ phrases ဖွဲ့ပြီး လေ့လာပါ။ တကယ့်ကို ရိုးရိုးလေးပါ။ phrases -ဆိုတာ စကားလုံးတွေကို ပေါင်းစည်းထားမှုပေါ့။ ၀ါကျတခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောကြည့်ရအောင်ပါ။ hate ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော်တို့တွေ လေ့လာမယ် ဆိုပါတော့။ အဲဒီစကားလုံးကို ရေးချ။ အဓိပ္ပါယ်ကို အဘိဓာန်မှာ ရှာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အလွတ်ရအောင် ကျက်။ ဒါကတော့ နည်းဟောင်းပါ။ စာအုပ်ထဲကနည်း။ ကျောင်းတုံးကနည်းတွေပေါ့။
ကျောင်းမှာတုံးက ကျွန်တော်တို့တွေ မီးနင်း လုံးကောက် ကျက်ဖူးကောင်း ကျက်ဖူးကြမှာပါ။ မီးနင်းစာအုပ် ထူထူကလေးလဲ ရှိကောင်း ရှိခဲ့မယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့တွေ မီးနင်းတွေကို တလုံးစီ ကျက်ခဲ့ဖူးကြတာပေါ့။ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုလို့ ကောင်းတာက phrase လို့ ခေါ်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို အစု အဖွဲ့ လုပ်ပြီး လေ့လာတာပါ။ ဒါဆို phrase ကိုရော ဘယ်လိုများ စုဆောင်းရမှာပါလဲ။
ကျွန်တော်တို့ နားထောင်နေတဲ့ တကယ့် အင်္ဂလိပ် အသံလွှင့်ချက်တွ ဖတ်နေတဲ့ ပုံပြင်လို စာအုပ်တွေထဲကနေ ရှာဖွေ စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့ အခါ စာအုပ်ထဲက စာရင်းအတိုင်း မကျက်လိုက်ပါနဲ့။
တကယ့် အင်္ဂလိပ် စစ်စစ်ကို နားထောင်ပါ။ စကားလုံး အသစ်တခုကို ကြားမိတဲ့ အခါ ချ ရေး။ ဒါမှ မဟုတ် ကျွန်တော်တို့တွေ အင်္ဂလိပ်ပုံပြင်တခုကိုဖတ်လို့ စကားလုံးတခုကို မြင်မိတဲ့ အခါ အဲဒါကို ချရေး ရမှာပါ။ သို့သော် အဲဒီ စကားလုံးသစ်တခုတည်းကိုတော့ မရေးမိပါစေနဲ့။ phrase တခု သို့မဟုတ် ၀ါကျရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကလေး တခုအဖြစ် ရေးရပါမယ်။ hate လို့ တလုံးတည်း ရေးမယ့် အစား “john hates ice cream” လို့ Phrase တခုလုံးကို ချရေးကြပါမယ်။
ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီလို လုပ်ကြပါသလဲ။ Phraes ဖွဲ့ပြီး လေ့လာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဘာတွေပါလဲ။ ကောင်းပါပြီ။ Phrase ကနေ ကျွန်တော်တို့ အချက်အလက် အတော်များများ ရနိုင်ပါတယ်။
နံပတ် ၁ အနေနဲ့ မှတ်မိ လွယ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့Phrase မှာက ပြည့်စုံတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိတယ်လေ။ သူ့မှာ ပုံပြင်ရဲ့ အရိပ်အငွေ့လဲ သန်းနေပါတယ်။ နားထောင်ရင်း သို့မဟုတ် စာဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ hate ဆိုတဲ့ စကားလုံးတခုကို ကြားရတဲ့ အခါ “John hates ice cream” ဆိုတဲ့ phrase တခုလုံးကို ကျွန်တော်တို့တွေ သတိရသွားပါမယ်။ ပုံပြင်တခုလုံးကို သတိရသွားပါမယ်၊ ဂျွန်ဆိုတာ ဘယ်သူ၊ သူ့မှာ ရေခဲမုန့် ရှိတယ်၊ ပြီးတော့ သူက ရေခဲမုန့်ကို မုန်းတယ်။ မကြိုက်ဖူး။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တွေ သတိရသွားမှာပါ။ ဒီလို အချက်အလက်တွေက phrase ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုရော hate ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ မှတ်မိအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းက လွယ်လင့်တကူ မှတ်မိအောင်ကို ကူညီမှာပါ။
နံပတ် ၂ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Phrase ကို သင်ယူတဲ့ အခါမှာ မီးနင်းတခုတည်းကို သီးသန့် လေ့လာတာမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Grammar ကို သင်ယူနေတဲ့ သဘော မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပုံကို သင်ယူနေတဲ့ သဘော သက်ရောက်နေပါတယ်။ Grammar ကို သီးသန့်ကြီး စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Grammar စည်းကမ်းတွေကို သိစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ဒေသခံ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ Grammar ကို သင်ယူတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့တွေ ကလေးဘ၀တကတည်းက Phrase အလိုက် သင်ယူကြတယ်။ လုံးကောက် သင်ယူကြတာမှ မဟုတ်ပဲ။
လုံးကောက် လေ့လာနည်းဟာ နှေးကွေးလှပါတယ်။ အထောက်အပံ့လဲ မဖြစ်လှပါဘူး။ ဘယ်လို Grammar မျိုးကိုမှလဲ မသင်ယူမိပါဘူး။ Phrase အလိုက် လေ့လာမယ် ဆိုရင်တော့ Phrase တခုတည်းတွင် မကပါဘူး။ (Grammar rules, usage စတဲ့ ) အချက်အလက်တွေကိုပါ သင်ယူတဲ့ သဘော သက်ရောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ သိကောင်းမှ သိပေလိမ့်မပေါ့။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်တွေ အဲသလို သဘောမျိုး သက်ရောက်နေပါတယ်။ ဥပမာ- ကျွန်တော်တို့ လေ့လာမိတာက John hates ice-cream. ဒါလောက်ပါပဲ။ John hates ရယ်လို့ ကတ္တားနဲ့ ကြိယာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ရမယ်( ကတ္တားက အနည်းကိန်းဖြစ်လို့ ကြိယာမှာ S ထည့်ရမယ်) ဆိုတဲ့ Grammar Rule ကို ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရတယ်လေ။ ဒါကို တမင် တကာ စဉ်းစားရတာတော့လဲ မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။ John hates ice-cream လို့သာ phrase အဖြစ် ရေးမှတ်ထားလိုက်ပါ။ လေ့လာပါ။ လုံးကောက် မကျက်ပါလေနဲ့။
နောက်နောင်မှာ He hates ice-cream. She hates ice-cream လို့ ပြောလေတိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေ s ကို ထည့်ပြောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် သင်ယူခဲ့ ပြီးပြီကိုး။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါကို Phrase ကနေ သင်ယူခဲ့ပြီးပြီလေ။
နောက်တနည်း စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ကျွန်တော်တို့တွေသည် စာအုပ်ထဲကနေ hate = မုန်းသည် ဆိုတဲ့ စကားလုံး တခုတည်းကိုသာ ကွက်ပြီး လေ့လာခဲ့မယ် ဆိုပါတော့။ ( တကယ် အသုံးပြု ပြောဆိုတဲ့ အခါမှာ) တချို့သော အမှားတွေကို ပြုမိတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ phrase အလိုက် လေ့လာခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲကိုး။ အဲဒါကြောင့် တခါတလေမှာ He hate ice-cream. ရယ်လို့ ပြောမိပါလိမ့်မယ်။ s ထည့်ဖို့ မေ့သွားမှာပေါ့။ အကြောင်းကတော့phrase ထဲ ၀ါကျထဲက မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုထားတဲ့ Grammar Rules ကိုမှ ကျွန်တော်တို့ မလေ့မိလို့ပါပဲ။
ဒါဟာ တကယ့် ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်း ၇ သွယ်ထဲက အသီးသီးသော နည်းလမ်းတွေဟာ အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ စကားလုံးအသစ်လေးတွေ တွေ့လေတိုင်း phrase အဖြစ် simple sentence အဖြစ် ချရေးကြရအောင်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ချရေးဖြစ်တဲ့ phrase ထဲက sentence ထဲက စကားလုံးတွေကို ဖတ်မိတဲ့ အခါတွေမှာ အဲဒီ Phrase, sentence ကို သတိရမိပါလိမ့်မယ်။ စကားလုံး တခုတည်းကို ဖတ်မိတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
( phrase အဖြစ် simple sentence အဖြစ် ချရေးတဲ့ ) ဒီပုံစံကို အမြဲမပြတ် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အဲလို ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Grammar အရည်အသွေးဟာ အများကြီး တိုးတက်လာမှာပါ။ Vocabulary တွေကိုလဲ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ပိုမို လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
အဲဒါကြောင်း မီးနင်း လုံးကောက်အစား phrase အဖြစ် simple sentence အဖြစ် ချရေးပြီး လေ့လာမယ် ဆိုရင် ခုလိုမျိုး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း နံပတ် ၁ ကို နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် လေ့ကျင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ကတော့ Phrase မှတ်စုလေး ဆောင်ထားဖို့ပါပဲ။ သင်ခန်းစာတွေ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်တွေ ကြားမိတာတွေထဲက စကားလုံးသစ် တစ်လုံးရလာပြီဆိုရင်ဖြင့် Phrase အဖြစ် ရေးချလိုက်ကြပါစို့။ တလုံးတည်း မဟုတ်ဘူးနော်။ ပြီးရင် နေ့စဉ် ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ Phrase တွေ sentence တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မှတ်စုလေး တည်ဆောက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မီးနင်းစာအုပ် မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ Phrase အဖြစ်သာ လေ့လာပါ။ ဒါဟာ နံပတ် ၁ နည်းလမ်းပါပဲ။ မနက်ဖြန်မှာတော့ နည်းလမ်း နံပတ် ၂ အတွက် သင်ခန်းစာကို ကျွန်တော်တို့တွေ အီးမေးလ်ကနေ လက်ခံ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ဆုံကြသေးတာပေါ့။
မူရင်း English ဆောင်းပါးကို ရလိုပါက ko.myintko@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Mg Kyaw Tint on June 30, 2012 at 21:09
Dear teacher ..... thankalot for your post. After i read your post which is called "the key to Excellent English Speaking", i liked your translation. I have got knowledge of Eng from reading your posts. If you are ok, write the posts again and again. i am going to wait to read the next posts you will write.
Permalink Reply by thae thae htwe on July 6, 2012 at 17:16
this is really useful post. thank u so much
Permalink Reply by thae thae htwe on July 6, 2012 at 17:21
we are waiting next post....
Permalink Reply by ko Myintko on July 7, 2012 at 13:57
အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလုပ်နဲနဲ များနေလို့ အလုပ်ပါးတာနဲ့ ဆက်ပါမယ် သည်းခံပေးပါ။
Permalink Reply by Miss.Htay Su Su Kywe on July 26, 2012 at 11:33
I liked this ways and your translation. Please , you write next ways. We are waiting next lessons.Thanks.
Permalink Reply by 2ry75mc45su7i on July 26, 2012 at 11:53
thank you very much for your post. may you be successful and peaceful !